Daniel 10 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
10 N’afọ nke atọ nke ọchịchị Saịrọs+ eze Peshia, e nwere ihe e kpugheere Daniel, onye aha ya bụ Belteshaza;+ ihe ahụ bụ eziokwu, e nwekwara oké ibu agha.+ Ọ ghọtara ihe ahụ, ghọtakwa ihe ọ hụrụ.+ 2 N’oge ahụ, mụ onwe m, Daniel, nọ na-eru uju+ ruo izu atọ zuru ezu. 3 Ataghị m achịcha dị ụtọ, ọ dịghịkwa anụ ma ọ bụ mmanya bara m ọnụ, eteghịkwa m mmanụ n’ahụ́ ma ọlị ruo mgbe izu atọ ahụ gwụrụ.+ 4 N’abalị iri abụọ na anọ n’ọnwa mbụ, mgbe m nọ n’akụkụ osimiri ukwu, bụ́ Hidekel,+ 5 m leliri anya hụ, ma, lee, e nwere otu onye yi uwe linin,+ keekwa ọlaedo si Yufaz+ n’úkwù.+ 6 Ahụ́ ya yiri nkume krisolaịt,+ ihu ya dịkwa ka àmụ̀mà,+ anya ya dị ka ọwa na-enwu ọkụ,+ ogwe aka ya na ebe ụkwụ ya yiri ọla kọpa na-egbuke egbuke,+ olu ya na-ada ka mkpọtụ ìgwè mmadụ na-eme. 7 Mụ onwe m, Daniel, hụrụ onye ahụ; ma ndị mụ na ha nọ ahụghị ya.+ Otú ọ dị, ụjọ tụrụ ha nke ukwuu, ha wee gbapụ gaa zoo. 8 O wee fọdụ naanị m, m wee hụ oké ọhụụ a. Ike ọ bụla afọdụghịkwa m n’ime, ọdịdị m gbanwekwara wee jọọ njọ, enweghịkwa m ike ọ bụla.+ 9 M wee malite ịnụ olu ya; ka m nọ na-anụ olu ya, ezigbo ụra buuru m+ ka m kpudoro ihu n’ala.+ 10 Ma, lee, otu aka metụrụ m,+ wee kpọtee m, m wee bilie gbuo ikpere n’ala ma bido aka n’ala. 11 O wee sị m: “Daniel, nwoke a hụrụ n’anya nke ukwuu,+ ghọta ihe m na-agwa gị,+ guzoro n’ebe i guzobu, n’ihi na e zitewo m ugbu a ka m bịakwute gị.” Mgbe ọ gwara m okwu a, ebiliri m, na-ama jijiji. 12 O wee gaa n’ihu ịsị m: “Daniel, atụla egwu,+ n’ihi na malite n’ụbọchị mbụ, mgbe i ji obi gị chọọ ịghọta ihe+ na iweda onwe gị ala n’ihu Chineke gị,+ a nụrụ ihe i kwuru, mụ onwe m abịawokwa n’ihi ihe i kwuru.+ 13 Ma onyeisi+ alaeze Peshia+ nọchiiri m ụzọ+ ruo ụbọchị iri abụọ na otu, ma, lee! Maịkel,+ otu n’ime ndị isi kasịnụ,+ bịara nyere m aka; ma mụ onwe m nọgidere n’ebe ahụ n’akụkụ ndị eze Peshia.+ 14 Abịawokwa m ime ka ị ghọta ihe ga-adakwasị ndị gị+ n’oge ikpeazụ,+ n’ihi na ọhụụ+ a bụ maka ọdịnihu.”+ 15 Mgbe ọ gwara m okwu ndị a, m kpudoro ihu n’ala,+ ekwulighịkwa m okwu. 16 Ma, lee! otu onye nke yiri ụmụ mmadụ metụrụ egbugbere ọnụ m aka,+ m wee meghee ọnụ m malite ikwu okwu+ wee sị onye ahụ guzo m n’ihu: “Onyenwe m,+ n’ihi ihe ahụ m hụrụ, ihe ọdụdọ malitere ịdọ m na mberede, enweghịkwa m ike ọ bụla.+ 17 Oleezi otú ohu onyenwe m si nwee ike ịgwa onyenwe m okwu?+ Ọ dịghị ike ọ bụla dị n’ime m ruo ugbu a, ọ dịghịkwa ume ndụ ọ bụla fọdụrụ n’ime m.”+ 18 Onye ahụ nke yiri mmadụ wee metụ m aka ọzọ wee mee ka m dị ike.+ 19 O wee sị: “Atụla egwu,+ nwoke a hụrụ n’anya nke ukwuu.+ Udo dịrị gị.+ Dị ike, ee, dị ike.”+ Ozugbo ọ gwara m okwu a, m jisiri ike wee sị: “Onyenwe m kwuwe,+ n’ihi na i mewo ka m dị ike.”+ 20 O wee gaa n’ihu ịsị: “Ị̀ maara n’ezie ihe mere m ji bịakwute gị? Ugbu a, m ga-agaghachi ịlụso onyeisi Peshia ọgụ.+ M gawa, lee! onyeisi Gris ga-abịakwa.+ 21 Otú ọ dị, m ga-agwa gị ihe e dere n’akwụkwọ nke eziokwu,+ ọ dịghịkwa onye na-akwadosi m ike n’ihe ndị a ma e wezụga Maịkel,+ bụ́ onyeisi unu.+